HERO OF MYANMAR: ဖြစ်သွားပြန်ပြီ မိန်းမစကားတွေ(NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ)
ဖြစ်သွားပြန်ပြီ မိန်းမစကားတွေ(NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲများ)
[13:45 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
NLD ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ဖို့နဲ့လက်၇ှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို မထောက်ခံဖို့ ပြောတုန်းက ဒေါ်စုပြောတာမှန်
တယ်။ခုလက်ရှိကာလ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဖွဲ့ စည်းပုံကို ထောက်ခံပြီးေ၇ွးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ကြံ
ပြန်တော့ လည်း ဟုတ်ကဲ့ ။ဒေါ်စုပြောတာ မှန်တယ်။အင်း ပြည်သူကတော့ ကြားထဲကငထွား ခါးနာရပြီ။
You look like chinese! You are brainless! What is your real name? Are you not dare to show your name? Where do you live?
ကဲ.. အားလုံးသဘောတူတူ မတူတူ အမေစုနဲ့ NLD ကိုဝိုင်းရံကြရအောင်လား။ အမေစုက ကိုယ့်ကျိုးစွန့် ပြီး တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးနာလည်းပြီးသားပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အငြင်းပွား ရန်မဖြစ်ကျရအောင်လား။ အားလုံးရဲ့ ပန်းတိုင်းက တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ ပါပဲ။
ဟိုက်ရှားပါး...... ပေါ်လာပြန်ပြီ တစ်ယောက်။ (နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းကတော့ သူတို့သာလျှင် ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုတယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြတာပါပဲ၊ မထူးဆန်ပါဘူး။)..လို့ ဆိုပါလား....။ (ဘယ်လောက်အထိ လူထုကို အကျိုးဖြစ်စေခဲ့သလဲ တာဝန်ကျေ ခဲ့သလဲ ပြီးမြောက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေနဲ့သာ တိုင်းတာရတာပါ။)..လို့ ဆိုပြန်ပဟ။ ဒီတော့... တလေးတစား သဘောထားအမြင်ကို တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်..တွေ လုပ်မနေနဲ့ တော့..။ ပြန်လာပြီး လူထုကို အကျိုးဖြစ်စေမဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အရင် လာလုပ်ပါအုန်းကွာ...။ ဘယ်လိုလူတွေလဲ မသိဘူး။ သံချောင်း၊သံခဲ၊သံလုးံ၊သံဒုတ်...."သံ" ကနေကို အောက်မချတော့ဘူး....။ "လပေါ်သားရေ" လျော့တိလျော့ရဲ နဲ့ ..။ ဘဲနုတ်သီး၊ ခွေးရေသောက်၊ ကြောင်ရေချိုး...။
၉၀ က သမိုင်းဝင်သွားပါပြီ။ အခု ၂၀၁၁၊ မကြာမီ ၂၀၁၂ မှာ ကျွန်တော်တို့ ၉၀ မှာ ကျန်နေလို့ မရပါဘူး။ ရှေးရိုးမစွဲ ပါနဲ့။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ လုပ်မှ ရတာပါ။ အပြောင်းအလဲကိုလိုချင်ရင် ခေါင်းဆောင် နေတဲ့သူကို ထောက်ခံရမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူချစ်တဲ့ ပြည်သူ့အတွက် ဦးစားပေး တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါ။
Tun Aung said...
Man,,, You are totally wrong! Let me ask you that, who are you?, where you from? What do you did for our Nation and People? Please be quiet, And support to our leader DAW AUNG SAN SU KYI!!!
ဘယ်သူကဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချချင် ပါ့မလဲကိုသံဒုတ်ရယ် ၉၀ ကိုတင်းတင်းဆုပ်မျက်နှာကိုမော်ပြီး ခပ်တင်းတင်းခပ်မာမာ လူတိုင်းနေချင်လှသပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မှာက ယဲ့ယဲ့ကျန်တော့တယ်လေ ခင်ဗျားမှာလည်းယဲ့ယဲ့ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားအသိပဲ။ ဒီလမ်းကမထွက်ရင် ဘယ်လမ်းကထွက်ကြမလဲ နိုင်ငံတကာက ၉၀ရလာဒ် ကိုထောက်ခံ လာအောင် ခင်ဗျားလုပ်နိုင်မလား။ခင်ဗျားမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး နော်အုန်းလှကိုလေးစားတယ်ဗျာ။သူ့ စကားကို အရေးထားရပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ခင်ဗျားရဲ့ ထောက်ခံမှုမထောက်ခံမှု၊ကျုပ် ရဲ့ ထောက်ခံမှုမထောက်ခံမှုကအရေးမပါ လှဘူးဆိုတာကို မမေ့နဲ့ ဗျို့ ။
November 20, 2011 12:25 AM
ကဲ ကိုသံပြုတ်ရေ .... ပြသာနာပါပဲ။ အရင်က အမှောင်ထဲ အလုံပိတ်မုဒိန်းကျင့်တာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ခဲ့မယ်။ အခု လူလယ်ကောင် အလင်းထဲ မုဒိန်းကျင့်ချင်ရင်တော့ တော်တော်သတ္တိရှိတဲ့ မုဒိန်းကောင်ပဲ။ စဉ်းစားကြဗျာ ပြောရတာမောတယ်။ ပြည်သူတွေ ဆန္ဒမေးမကြည့်နဲ့။ ကျုပ်ပြောလိုက်မယ်။ ကြိုက်တဲ့အစိုးရတက် စားဝတ်နေရေးပြေလည်မယ် နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေနိုင်ရင် ရပြီ... ဟုတ်ပြီလား။ အခု ဒေါ်စု က အဲလို နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ သူကြိုးစားနေတယ် ထောက်ကြမယ် ဒါပဲ ရှင်းနေတာကို လေလာပစ်နေတယ်။ ခင်ဗျားရော လင့်ဆရာကြီးရော ဈေးကွက်ပျောက်နေတဲ့ နိင်ငံရေးသမားဟုဆိုသောလူများရော လူထုခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပြည်တွင်းဝင်လာပြီးလုပ်ကြပါ။ ထောက်ခံသင့် ထောက်ခံပေးပါ့မယ်။ အွန်လိုင်းလာလေပစ်နေတယ်။ လူဦးရေ သန်း၆၀ ရှိတယ်။ ခင်ဗျားဆောင်းပါး တစ်သောင်းမဖတ်ဘူး။ ပေါက်ကရတွေဗျာ။ စိတ်ဆင်းရဲတယ်။ ဂေါက်တောက်တောက်နဲ့။ လက်တွေ့မကျတာတွေ ဘေးထိုင်ဘိုင်ပြောနေတယ်။
I agree with NLD. It's good for burmese people.
ကျွန်တော်ကဆရာတို့ လောက်မတော်ပါဘူး၊ ဆရာတို့ကအများကြီးတွေးတယ်၊အများကြီရေးတယ်၊့့တော်တယ်၊ကျွန်ိတော်ရဲ့ အမြင်ကိုအသိကို မူလတန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချင်သတ်မှတ်ပါ၊ကျွန်တော်သဘောပေါက်ထားတာကတော့.... ကိုက်တတ်တဲ့ခွေးဗိုက်အောက်ကဒုတ်ကိုရဖို့ ခွေးကိုထန်းလျှက်ကျွေးရမယ်၊ဒုတ်ရမှရိုက်လို့ ရမယ်။ ဒါပါဘဲး။ ဒုတ်က မည်သူတွေလဲး၊ခွေးက ဘယ်ကောင်လဲး၊ထန်းလျှက်ကဘာကိုကိုယ်စားပြုလဲး၊ စဉ်းစားဝေဖန်ကန့် ကွက်ထောက်ခံ ဒါတွေကို မြန်မာလူထု့ ရရှိဘို့ အတွက် အဓိက ပြုင်ရမှာက လေနဲနဲလျှော့
ko hinthar said...
အထိကရုန်းတစ်ခုပေါ်လာတဲ.အထိ ဆက်စောင်.ပေါ.ဗျာ။ ရိုးရိုးတန်းတန်း မစောင်.ပဲအဓိဌာန်ပုတီးလေးစိပ်ပြီးဖြစ် ဖြစ်သေရည်လေးမှီဝဲရင်းဖြစ်ဖြစ်စောင်. ပေါ.ဗျာ။စေတနာမှန်တဲ.ဆရာတို.ဆု တောင်းပြည်.၀တော.မှာပါ..နော။ သိပ်လည်းစွေ.စွေ.မခုန်ပါနဲ.ဗျာ။ ခင်ဗျားတို.ကတော.ပြည်သူတစ်ရပ် လုံးကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို.ထင်နေတာ လား။ပြည်တွင်းကလူတွေကခင်ဗျားတို. ဘာတွေလုပ်ခဲ.လဲဘာတွေလုပ်နေလဲ သိလည်းမသိ၊စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူးဗျ။
This time I only read the comments .. Nice comments. And I will no more read U Lwan Swe's articles or The others' articles that he posted by others' name xD Myanmar Go UP UP !!! Fighting
November 20, 2011 2:05 AM
အင်း ကိုသံဒုတ်ရေ ၉၀ တုန်းက လည်း အရည်အချင်းမရှိဘဲ ထမိန်ခြုံပြီင်္း အမတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်မို့ န၀တ ကဆွဲစားခံလိုက်ရတယ် ခုလည်း နိုင်ငံရေးနားမလည်ဘဲ ဒေါ်စု လုပ်သမျှ အကုန်ကောင်း အကုန်မှန် နဲ့ ထမိန် စွန်တောင် ဆွဲလိုက်ပြီး နအဖ ဘောင်းဘီချွတ် အရေခြုံ အစိုးရရဲ့ အရိုးအရင်းလေး စားဘို့ကြံနေပြန်ပြီ ပြည်သူတွေ တော့ ဒုခတွင်းက ထွက်ဘို့ မလွယ်ပါဘူးဗျာ
ဟေ့လူ သံဒုတ် မင်းထက် ဦးနှောက်ရှိလို့ မင်းထက် ပါဝါသာလို့ ပြည်သူက ထောက်ခံတာ NLD ကို ဘေးထိုင်ပြီးတော့ လီးစကားတွေပြောမနေနဲ့ အထင်မကြီးဘူး မင်းလိုကောင်ကို ဘခက်
want to fuck your back side. fuck you man
November 20, 2011 2:55 AM
စာရေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေကြတဲ့မိတ်တွေများခင်ဗျား၊ညစ်ညမ်းတဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာမှူတွေကို Comments box တွေအပေါ်မတင်ကြပါနှင့်။
November 20, 2011 4:23 AM
November 20, 2011 4:27 AM
“အမည်ပေးမထား” (ကာတွန်း မောင်ရစ် - မိုးမခ၀က်ဘ်ဆိုက်) မိုးမခ ကတော့ ဒီလို လှောင်ထားပါသတဲ့ ဗျာ။